यि नेता जो अमेरिकाकाण्डबाट अस्ताए - नुवाकोट एक्स्प्रेस : मोफसलकै लोकप्रीय डिजिटल एक्स्प्रेस
मैले बासँग त गणेश पण्डितका लागि भोट माग्न त सकिन, तर आमालाई भनेँ । भोट दिएर आएपछि आमाले भन्नुभएको थियो–‘लल दिएँ एक भोट चाँही मादललाई ।’ चुनावमा डा. लोहनी, जीतसिंह खड्का विजयी भए । शायद चाैथो नम्बरमा हुनुभएर गणेश सर पराजित हुनुभयो । तर उहाँ जनताको मनमा बस्न सफल हुनुभयो ।
गणेश सरको राजनीतिक यात्रा २०४६ सालपछि निकै माथि पुग्यो । २०४८ सालमा उहाँ नुवाकोटको तत्कालिन क्षेत्र नं. २ बाट एमालेको तर्फबाट सांसद पनि विजयी हुनुभयो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा उहाँलाई हराउने जीतसिंह खड्कालाईनै यसपटक उहाँले हराउनुभएको थियो ।त्यतिखेर नुवाकोटको तीन क्षेत्रमध्य १ नं.बाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, २ नं. बाट गणेश पण्डित र ३ नं. बाट अर्जुन नरसिंह केसी विजयी भएका थिए ।
बाउ–बाजेले चर्को व्याजमा गरिबलाई दिएको ऋणलाई पण्डितले मिनाहा गरेर ती गरिबका लालपूर्जा फिर्ता गरिदिएको चर्चा अहिलेसम्म नुवाकोटमा हुनेगरेको छ । त्यतिखेरको सम्पन्न परिवारमा जन्मिएर, काठमाडौंमा गएर हाइस्कुल,क्याम्पस पढेर पनि गाउँमा शिक्षक भएर उहाँले पुर्याउनुभएको योगदान निकै उच्च छ ।
एमालेका नेताहरूका मण्डी अोढेर घिउ खाने चरित्रले गर्दा इमान्दार व्यक्ति राजनीतिबाट अस्ताउनु परेको थियो । त्यतिखेर सभामुख थिए दमननाथ ढुंगाना । अमेरिकी सरकारले भरखरै नेपालमा हुर्कदै गरेको प्रजातन्त्रलाई मजवुत बनाउन सहयोगको सुरुवात गरेको थियो । त्यसक्रममा नेपालका सांसदहरुलाई अमेरिकामा ल्याएर यहाँको सिस्टम,विकासका बारेमा देखाउने गरेको थियो ।
अमेरिका भ्रमणको काण्ड नभएको भए यतिखेर पण्डित नेतृत्वको माथिल्लो तहमै पुग्ने क्षमता बोकेका नेता थिए । सिपी मैनालीसँगको निकटता पनि पण्डितका लागि राजनीतिमा पछाडी खेदिने एउटा कारक थियो । २०५४ मा एमाले विभाजन पछि गणेश सर माले तिर सकृय हुनुभएको थियो । मैनालीकै पछी लाग्दा उहाँ २०५८ मा एमाले र मालेबीच एकीकरण हुँदा समेत उहाँ जोडिनुभएको थिएन । तर उहाँ पछिल्लो समय माधव नेपालसँग अति निकट रहेर पुस्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आवद्ध रहनु भएको थियो ।
झण्डै ५ वर्ष अघि छोरा किशोरको परिवारलाई भेट्न अमेरिका आउनुभएको थियो । मसँग त्यतिखेर किशोरको परिचय थिएन । सानफ्रान्सिस्कोमा बस्दै आउनुभएका उहाँका साख्खै भान्जा धनञ्जय नरसिंह केसीले एक दिन फोनमा भन्नुभयो–‘रामचन्द्र भाई, गणेश मामा पनि आउनुभएको छ अमेरिका । कुरा गर न एक पटक ।’ धनञ्जय दाईलेनै किशोरको फोन नम्बर दिनुभएपछि हाम्रो कुराकानी भएको थियो ।
‘साँचो समाजवादी मुलुक त अमेरिका पो रहेछ,’ त्यतिखेर उहाँले मसँग भन्नुभएको थियो । यहाँको सरकारले शिक्षा,स्वास्थ, सुरक्षा, विकासमा गरेको लगानीलाई हेरेर उहाँले भन्नुभएको थियो ।